DRC: အင်္ဂါနေ့သြဂုတ်လ 27 2019 အပေါ်ဒေသခံစာနယ်ဇင်းများ၏သုံးသပ်မှု - အာဖရိက - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အာဖရိကဖိထားပါ "DRC: အင်္ဂါနေ့သြဂုတ်လ 27 2019 အပေါ်ဒေသခံစာနယ်ဇင်းများ၏သုံးသပ်မှု - အာဖရိက
DRC: အင်္ဂါနေ့သြဂုတ်လ 27 2019 အပေါ်ဒေသခံစာနယ်ဇင်းများ၏သုံးသပ်မှု - အာဖရိက
Tele RELAY တစ်ခု 27 သြဂုတ်လ 2019
- တနင်္လာနေ့ကအစိုးရ Ilunkamba ဗြဲ၏အဖွဲ့ဝင်များစာရင်းကို၏ထုတ်ဝေဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကအမျိုးမျိုးသောမှတ်ချက်တွေနှိုးဆွသောသူတို့ကိုထုတ်ဝေသတင်းစာများအနေနဲ့သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့တစ်ခုတည်းသောဘာသာရပ်အင်္ဂါနေ့
CENCO လူအစေခံရန်ဝန်ကြီးများတောင်းဆိုလိုက်သည်။ ခေါင်းစဉ်အဖြစ်မီးပြတိုက်ပေးထားပါတယ်။ အစိုးရဖြန့်ချိ၏သတင်းမှတုံ့ပြန်သူအစီရင်ခံ, ကွန်ဂိုအမျိုးသား Episcopal ညီလာခံ (CENCO), ၎င်း၏အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနှင့်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကတဆင့်သစ်ဝန်ကြီးများသတိပေးအမြန်ခဲ့သည် သမ်မတနိုငျငံတညျးဟူသောလူအစေခံရန်သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးတာဝန်နိုင်ငံသား။
ထပ်အမျိုးသားရေးအလုပ်အမှုဆောင်ခေါင်းစဉ်၏အဖွဲ့ဝင်များစာရင်းကို၏ထုတ်ဝေအကြောင်းကိုအမြဲတမ်း LE PHARE, "အစိုးရ Ilunga ငါ။ အလုပ်သို့မဟုတ်သင်္ဘောပျက်" အခုတော့အလုပ်လုပ်ကိုင်မယ့်! "Exclaim သတင်းစာအစီရင်ခံစာများ:" ဒါဟာမနေ့ကနံနက်အစောပိုင်းနာရီအတွင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့ကဖြန့်ချိသည့်စကားရပ်ဖြစ်ပါသည်, တနင်္လာနေ့, သူ့နိဒါန်း၌သူ၏ပထမဦးဆုံးအစိုးရအဖွဲ့သည်များ၏ထုတ်ဝေဖို့ရှေ့ပွေးနိမိတျဖြစ်ပါတယ်။ "လူအပေါင်းတို့သည်ပြဿနာများ, မလုံခြုံမှု, ဆင်းရဲမွဲတေမှု, အလုပ်အကိုင်, အခြေခံအဆောက်အအုံ ... အရေးတကြီးဖြေရှင်းနည်းများ, ဒုတိယဝန်ကြီးများ, ပြည်နယ်၏ဝန်ကြီးများ, ဝန်ကြီးများလိုအပ်ရှိရာဤတိုင်းပြည်များတွင်ဒုတိယဝန်ကြီးများအရအဖြစ်မကြာမီအစိုးရက investiture ဖွစျလိမျ့မညျအဖြစ်အလုပ်လုပ်စေရပါမည် အမျိုးသားညီလာခံ "ဒီသတင်းစာတောင်းဆိုထားသည်။
မိမိအဆောင်းပါးထဲမှာနှင့် ပတ်သက်. အနာဂတျ "ဟု The FCC သည်မျိုးချစ်စိတ် Tshisekedi နှင့် Kabila မြင့်မားအသိကြိုဆိုသည်။ " ဆိုတဲ့
ညီအစျကိုအဘို့, "အစိုးရသစ်, ဟောင်းမျိုးဆက် (27%) နှင့်သစ်ကို (76%) တို့အကြားအရောအနှော၏ရလဒ်လူတိုင်းသဘောတူသူကိုတောင်ရှိပါတယ် celui- ဝန်ကြီးချုပ်၏ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုထား ၏သတ်မှတ်ရေးများအတွက်ချည်ပေးထားခဲ့သော "အလားအလာဝန်ကြီးများ," ဟုအဆိုပါ cache-FCC သည်ညွန့်ပေါင်းအောက်ရှိသမ္မတနိုင်ငံအစိုးရမှယုံကြည်လူတို့နှင့်အတူတိုင်းပြည်များကိုခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ပြီး၏ရည်ရွယ်ချက်များ၏အောင်မြင်မှုတစ်ခုအတားအဆီးဖွဲ့စည်းကြဘူး အစိုးရ "။
"Sylvester Ilunga: မီးသူ့ရဲ့ပထမဆုံးဗတ္တိဇံပေးရန်! "သာယာဝပြောတဲ့သတ်မှတ်ထားသည်။ ကောင်းစွာခေါင်းစဉ်ကသူ့ဆောင်းပါးထဲမှာ, သတင်းစာထိုနေ့ရက်ကိုသူအမျိုးသားကိုယ်စားပြုမှုများ၏ရှေ့မှောက်၌တစ်ဦးတည်းဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ "အဲဒီအထဲကထောက်ပြသည်။ သူနဲ့သူ့ခြောက်ဆယ်ခြောက်အသင်းဖော်, လှုပ်, ဆက်ဆက်, တံတောင်ဆစ်ချိုး, သူတို့ကနွေး, သစ်သားအဘယျအပိုငျးအပျေါကိုသရုပ်ပြသငျ့သညျ။
သူကဆက်ပြီး: "Ilunga Ilunkamba Sylvestre ဆင်းအသက်အရွယ်နှင့်စီးပွားရေးပညာရှင်နှင့်အများပြည်သူရေးရာလိုင်စင်ရမန်နေဂျာအဖြစ်သူ၏ရှည်လျားသောအတှေ့အကွုံက၎င်း၏ 76 နှစ်ပေါင်းကနေကွန်ကရစ်အဆိုပြုချက် R & ဃရစေမည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်ဟုဆိုသည် ယင်း၏လူဦးသည်သူ၏ဒုက္ခနှင့်ဆင်းရဲလာ၏, နှင့်နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းများနှင့်အမျိုးသားရေးပိုင်နက်တစ်လျှောက်လုံးကျယ်ပြန့်မလုံခြုံမှုများတစ်ကျော့ပြန်လာ Dummy အပေါငျးတို့သထပ်ခါတလဲလဲစော်ကားမှုအထက်တွင်င်း၏လက်ရှိအခုထက်၏ကွန်ဂို။
ဖဲ Tshisekedi ၏ရူပါရုံထံမှ ထွက်. မပါဘဲအလှည့်၌, ကမ္ဘာမှအတော်ကြာ၏သက်သေများ၏မုတ်ဆိတ်အောက်မှာကျင့်သုံးလာခဲ့သည်မှာ vis အမျိုးသားတို့ကိုကတိကဝတ်တခုတစ်ခုလုံးကိုပေါင်းချုပ်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်သောသမ္မတနိုင်ငံသမ္မတရွေးချယ်တင်မြှောက်ကြေညာ ဇန်နဝါရီလ 24 2019 ကျော်, မိမိအစောင့်အပေါ်ဖြစ်ရမည်။ နှင့်စိတ်သဘောချင်းတူကဟိုတယ် du ကွန်ဂိုမြစ်မှာနောက်ဆုံးဇူလိုင်လကြီးစွာသောညနပေိုငျး 29 ဖို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သောညွန့်ပေါင်း၏သဘောတူညီချက်ဖြင့်သတ်မှတ်ကန့်သတ်ထက်မပိုသင့်ပါတယ်။
သူကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအပေါငျးတို့သညျအခွားအရေးပါသောအပြဿနာများကိုကြည့်ရှုရန်, သို့သော်, ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤနေရာတွင် Allusion အီဘိုလာရောဂါ, ဝက်သက်, အခမဲ့မူလတန်း, အလယ်တန်းနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရေး, အခြေခံလူမှုရေးလိုအပ်ချက်နှင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး၏အဆက်မပြတ်ကြီးထွားလာတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့တူအားလုံး epiphenomena ၎င်း၏စက်မှုနှင့်ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးသူများအားလုံးသည်အခြားလူမျိုးတို့နှင့်တကွအကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများပြန်လည်စတင်။ " သာယာဝပြောတဲ့ပြီးတော့လေ့လာတွေ့ရှိ: "ဒါဟာပူကြည့် ... "
ဖိုရမ် DES ဟာ AS ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်ခေါင်းစဉ်စဉ်တွင် "သူတို့သက်ဆိုင်ရာစားပေးမှု, Gilbert Kankonde (cache) နှင့် Celestin Tunda (FCC သည်), အစိုးရ၏ရှေ့တန်းမှအတူ။ "
သူကမှတ်ချက်ချ -t ဝိညာဉျတျောတွဲပြီးကဲ့သို့ရှိအစိုးရ Ilunkamba အတွင်းစားပေးမှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌။ ဖိုရမ် DES ဟာ AS, အဒုပရီးမီးယားလိဂ် cache / UDPS VPM FCC သည် / PPRD အားဖြင့်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။ ဒါဟာ၏မရှိခြင်း၏အမှု၌အစိုးရ၏ဦးခေါငျးကိုကူညီရန်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်ဖွယ် pair တစုံနဲ့တူရဲ့။
ရှေးခယျြခဲ့ကြသူအတှေ့အကွုံ၏အခြားနှစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချယောက်ျားကဲ့သို့တဦးတည်းသည်။ Gilbert Kankonde သားအိမျ UDPS တရားဝင်သိရသည်။ Celestin Tunda Ya Kasende, 30 နှစ်ပေါင်း bar ကိုအပေါ်တစ်ဦးအမြင့်ထံမှကျော်ကြားတဲ့ရှေ့နေလည်းဒီသတင်းစာ Rais Kabila ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့သစ္စာအရှိဆုံးဖြစ်လူသိများသည်။
ဘိုနီ Tsala တီ
DRC: စာနယ်ဇင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းတနင်္လာနေ့သြဂုတ်လ 26 2019 - အာဖရိက
DRC: ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သြဂုတ်လ 28 2019 အပေါ်ဒေသခံစာနယ်ဇင်းများ၏သုံးသပ်မှု - အာဖရိက